SHIPPING, DELIVERY, REFUND uye KUDZOKA Sangano - shoppingdirect24.com - SD24
NESVA: NAMWE MAMVARA - MHONA, PLANET, MUTEMO, SALT
MOBILE PHONE PHOTO STUDIO - ZOOM, FISHEYE, STABILIZERS, STUDIO EQUIPMENT, ETC.
GPS, Bluetooth uye Fitness Tracker
Zvose ZVINHU SOLAR
Hand Painted Art, Zvinyorwa uye Zvigadzirwa zvemavara
KUBVA USA USA
CRYSTAL YENYORIA YOKUTAURA NEZVIONA
musha > SHIPPING, DELIVERY, REFUND uye KUTENDA KUTANGA
Unowana mari yako kana:
- iyo yakagadzirwa yakasarudzwa haina kufananidzwa, imwe hukuru kana ruvara kupfuura yakarayirwa
- chibereko chakakonzerwa chikafu uye chakatsanangurwa sepakutanga
- iyo yakagadzirwa ine zvimwe zvinokanganisa
Hatisi ivo vane mhosva:
- nokuda kwekukuvadzwa kwehuputi kana chigadzirwa chakakonzerwa nehutachiona hwekushumira
- kana chigadzirwa chacho chinotumirwa zvakare nehutachiona hwekushumira nekuda kwezvikonzero zvatisingaiti
Isu tinozvirumbidza kugovera pachena mahwendefa epasi rose munyika yose yezvose! Tinovhara mari yekutumira-kupi zvako kwaunenge uri!
Sei iwe anotakura package?
Pachipiti kubva kuvhizimisi, mabhizimusi, vatengesi kana vatengesi muChina, Hong Kong kana Shanghai vachaendeswa neEpacket kana zviripo kunyika yako kuti zvikurumidze kutumirwa uye pamwe chete nemari inowanikwa mari inowanika.
Kushandiswa kwemishonga inobva kune dzimwe nzvimbo nzvimbo ichaitwa kuburikidza nekuendesa mberi kwekutumira, kunze kwekurayirirwa zvimwe.
Made in on demand products will be produced and shipped by one of our made on demand print and production partners. Nokuda kwehuwandu hwekugadziriswa kwezvinhu zvekugadzirwa kwemishonga uye nzvimbo dzekutumira dziri mune dzimwe nyika dzakadzivirirwa uye nyika (US, nyika dzakasiyana-siyana dzeEuro neAustralia). Muzviitiko zvakawanda zvivako zviri pedo newe zvichashandiswa kubudisa uye kutumira chigadzirwa. Kana uchienzanidza iwe uri mugari weEU tichaedza kubudisa uye kutumira kubva kuEU kuti tisava nematambudziko nemitambo kana zvimwe zvinetso zvekupinda. KuAmerica, Australia nedzimwe nzvimbo uye madunhu akaenzana mazano aripo uye achashandiswa, kana aripo. Kusiyanisa kunogona kushanda uye kuve kwakakosha nokuda kwezvikonzero zvepamusoro kana zvikwereti zvekugadzira zvinhu uye kuwanikwa.
Kungofanana nedzimwe sangano retailers, we haigoni kutongwa nemhando ipi zvayo yemitero, kutengesa mitero kana mari yemunharaunda kana zvinhu zvave zvichitumirwa. Maitiro eTsika anosiyana nenyika uye kunewo nguva dzakawanda kuchinja. Nokutenga zvigadzirwa zvedu, unobvumirana kuti imwe kana kuti mamwe mapegiji emurairo umwe anogona kutumirwa kwauri uye anogona kuwana mitero yemari uye kushandiswa mari pavanosvika kunyika yako uye zvichienderana nenyika yako mitemo.
Iwe unogona kuda kubvunza kana kutsvaga paIndaneti pamusoro pemamiriro ako enyika tsika dzisati dzarayira. Izhinji huzhinji hwezvinhu huchasvika pasina nyaya dzakadaro.
anoita kutumirwa kutora yakareba sei?
Kutumira nguva inopesana nenzvimbo. Aya ndiwo matanho edu, asi haagoni kuvimbiswa:
Nzvimbo Inofanirwa Kutengesa Nguva
United States 4-15 Bhizimisi mazuva
Canada, Europe 6-25 Bhizimisi mazuva
Australia, New Zealand 6-30 Mazuva emabhizimisi
Central & South America 15-55 Mazuva emabhizimisi
Dzimwe nzvimbo 15-55 Mazuva emabhizimisi
Unoziva anopa club mashoko?
Hongu, tichashandisa shanduro yekufambisa kana iripo yekutora kwako. Iwe uchagamuchira imeyeri kamwe nguva yako yekutakura ishamba ine zvinyorwa zvako zvekutsvaga.
Tracking wangu anoti "hapana mashoko anowanika panguva".
Kune mamwe makambani ekutumira, zvinotora 1-5 mazuva ekugadzirisa kurongeka kwako uye zvinogona kutora rimwe remazuva 2-5 bhizinesi kuti ruzivo rwekutsvakurudza ruvandudzike pahurongwa. Kana tsamba yako yakaiswa kupfuura kwemazuva ebhizinesi 6 akapfuura uye hapine ruzivo pane nhamba yako yekutevera, tapota taura nesu.
Kwangu zvinhu atumirwe muna imwe pasuru?
Pamusana pezvikonzero zvekunyoresa, zvinhu zviri mukutengesa kumwechete dzimwe nguva zvinotumirwa mumapathoroji akasiyana.
Kana uine mamwe mimwe mibvunzo, tapota taura nesu uye tichaita zvatinokwanisa kuti tikubatsire.
REFUND uye KUDZOKA Purogiramu
Pasinei nokuti chikonzero chekudzorera kana chibereko chekudzorera chibereko chinogona kunge chiri, isu ticharamba tichiedza kusarudza kwakanaka!
Mirairo yose inogona kubviswa kusvikira yatumirwa. Kana tsamba yako yakabhadharwa uye iwe unofanirwa kuchinja kana kubvisa urongwa, iwe unofanira kutitaurira pakarepo. Kamwe kuiswa kwekutakura uye kutumira kwekutanga kwave kwatanga, haugone kuregererwa.
Unowana kubhadhara apo:
- Chimwe chinhu chawakaraira hachina kusvika munguva yakapikirwa - tine pro-forma mazuva 60 akachengetedzwa, asi zvinhu zvizhinji zvinosvika zvakatangira kare.
- Chimwe chinhu chawakagamuchira chakavimbiswa kuva chechokwadi, asi chakanga chakaipa
Kana nokuda kwechikonzero chipi zvacho iwe usingadi chibereko chawakagamuchira unogona kukumbira kubhadhara asi unofanira kudzorera chinhu uye chinhu chacho hachifaniri kushandiswa uye mumapurasitiki epakutanga. Zvimwewo, nokuda kwezvikonzero zvehupfumi (kunyanya kwezvinhu zvakaderera zvigadzirwa) uye pasi pechisarudzo chedu unogona kutsvaga mvumo yekuparadza chigadzirwa uye kutitumira isu-uchapupu-nekuda kwechinhu ichi tapota tibvunze isu tisati tasvika. Tichapa mazano pamusoro pekero rekudzorera yechinhu chacho.
Mishonga inogonawo kugoneka kana chinhu chakaipa chichigamuchirwa maererano nemuvara, ukuru, kana muenzaniso (uchapupu hunoda [foto]).
Zvitoridzo zvinogona zvakare kana tiye chinhu chakasvika mumatambudziko akawanda (uchapupu hunoda [foto]).
Iwe unofanirwa kutumira tsamba yako yekutumira kana kana:
- Iyo purasi yasvika mune zvakakanganisika
- Kurongeka kwakashaya
Ndapota cherechedza kuti zviyero zvekukura zvakapiwa zvinogona kungwarira zvishoma, sezvo zviyero zvinowanzoitwa nemaoko.
Mifananidzo pane zvigadzirwa fotos inogona kunge yakasiyana zvakanyanya seyokujekesa migumisiro, kamera yemakona kana kombiyuta inoratidzira nyaya.
Hatigoni kubvuma kudzokera kune zvigadzirwa zvakaitwa paunoda iwe. Made in on demand products are identified as such in the product description.
Kubhadhara hakukwanisi kuitwa kana:
- Itairi yako haina kusvika nekuda kwezvinhu zviri mukati mekutonga kwako (kureva kupa hutauri isina kutumira kero, kure nemusha kwenguva yakareba uye / kana yakadzoserwa nehofisi yako yepositi isina kushandiswa)
- Dare rako harina kusvika nekuda kwemamiriro akasiyana kunze kwekutonga kwedu (kureva kusati yakonzerwa netsika, kunonoka nenjodzi yepanyika).
Zvimwe mamiriro akasiyana kunze kwekutonga kwedu.
Iwe unogona kutumira zvikwereti zvekubhadhara mukati mezuva re15 mushure meiyo yakatarwa nguva yekuendesa (mazuva 60). Iwe unogona kuzviita nokutumira mharidzo pane Contact Us page.
Ndapota cherechedza kuti tiye checkout uye nzira yekubhadhara inotungamirirwa nekambani MLVEDA uye iwe uchadzoserwa kumapeji avo ezvo. Checkout uye kubhadhara kunoitwa mune mari yako yakasarudzwa.
Hatingazombooni nheyo yako yekubhadhara yePaypal nhoroondo kana nhamba dzekadhi rechikwereti. Zvose izvi zvakagadziriswa zvinosanganisira muperekedzi wekubhadhara chete. Tinoshandisa Stripe kubhadhara kadhi rechikwereti - kuvimbwa nemamiriyoni emabhizimisi munyika yose.
FUNGAI RARIDZA CHINHU CHOSE!
Rwendo rweEaster EPacket Nyika
FUNGAI BHISISISA UYE IE EMAIL VIP MAPODZE KUSHANDISWA KWEMWEYO!
MIRIMI 100 NE160 CURRENCIES DZINOBATSIRWA!
Our Hand Painted Art uye Zvinyorwa zveETSY !! Ive noruoko rwakavezwa pepa Picasso kana Rembrandt !!
Kurarama Kwemigwagwa Zvokudya